Ego ole mmanu di mmanu ka agbakwunye ncha - mmanu mmanu mmanu mmanu | AromaEasy
Ihe na Nwere ike 23, 2020 Nwere ike 23, 2020 by Matt
You gha gbagwojuru anya banyere mmanu di nkpa ị ga-etinye na ncha mgbe ị na -acha ncha? Ọ bụ ihe na-akụda mmụọ ịgbakwunye mmanụ dị oke mkpa dị oke ọnụ ma mechaa ncha ncha. Ọzọkwa, ọ bụ ihe na-akụda mmụọ ịnweta ncha mara mma mana enweghị isi n'ihi ịtinye obere mmanụ na ntinye ahụ.
G guo mara imata ihe ị ga-etinye, ka inwetakwu otutu ihe n’akpa, ma chekwaa oge gi.
Yabụ, Mmanụ E Kwesịrị Ka M Kwesịrị Isi Tinye Ncha?
Ọ bụ ezie na ojiji dị iche dabere na mmanụ dị mkpa dị iche iche, ọnụego ojiji n'ozuzu ya, bụ 3% site na ịdị arọ.
Mgbe m na-ekwu maka ịme ncha, ọ ga-akacha m ahọrọ ibu karịa ịda dị ka usoro ịgbakọ. Ọ dị mma ma baa uru karịa ịhapụ mmanụ dị oke mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, ncha ncha 3lb (1360gram), ị nwere ike itinye mmanụ dị mkpa dị lavender 3%. 3% nke 1360g bụ 40.8g, nke bụ ego kachasị nke lavender mmanụ dị mkpa site na ibu ị nwere ike itinye na ntinye ahụ.
Ogologo nke mmanụ dị mkpa a bụ 0.905g / ml. Kewaa 40.8g site na igwe ihe a, mgbe ahụ ị ga - enweta ọtụtụ mililirs mmanụ ị ga - eji. Na azịza nke ajụjụ mgbakọ na mwepụ a bụ 45.08mL.
Njupụta nke mmanụ dị mkpa dịgasị iche, yabụ na ngafe tii nke mmanụ ọ bụla dị mkpa nwere ike ịdị iche. Nke a bụ eserese mmanụ dị mkpa maka ịme ncha.
Mmanụ dị mkpa Ikike% Ibu ibu maka ncha 1lb Ngosiputa ego di na tsp
lavender 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
lemongrass 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
Chamomile 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
Eucalyptus 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
/ Spearmint 2% 0.32 oz / 9g 2 teaspoon
Rosemary 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
Osisi Tea 3% 0.48 oz / 13.6g 2.5 teaspoon
Ylang ylang 3% 0.48 oz / 13.6g 3 teaspoon
Mara: Mkpa mmanụ dị mkpa na tebụl a na-ezo aka na nchịkọta maka ịme ncha 1lb
Mara: Somefọdụ mmanụ dị mkpa akọwapụtara. Ojiji nke nutmeg kwesịrị ịbụ 0.05%, nke bụ ụzọ erughi 3% n'ihi nnọchi ahụ dị ike. Banyere otto rose, ihe a na-atụ aro bụ 0.2% n'ihi isi siri ike ya.
Ihe ndị na-emetụta mkpa mmanụ dị mkpa maka ịcha mkpụrụ
Ihe ị ga - atụle mgbe ịchọrọ itinye mmanụ dị mkpa ncha bụ ọnọdụ okpomọkụ. Mmanụ ọ bụla dị mkpa nwere ọkụ ọkụ, nke bụ ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri mmiri nwere ike ịmụnye ọkụ na ọnọdụ ụfọdụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụrụ na mmanụ dị mkpa na-ewe iwe dị ọkụ na ntinye ahụ, isi ahụ ga-ere.
N'ezie, enweghị ihe akaebe ma ọ bụ nchọpụta sayensị gosipụtara na isi ga-emebi n'okpuru ọtụtụ okpomoku. Mgbe anyị kwuworo nke a, ka anyị chebara ihe a echiche. Ọ ka mma nchekwa karịa nwute, ihe ọ bụla.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji mmanụ dị mkpa na obere ọkụ dị na Ntụziaka, zere ịmịcha ncha ma ọ bụ mee nchacha usoro. Ọtụtụ mgbe, ncha ga-ekpo ọkụ dị ka 180 ° F n'oge a na-etinye gel. Banyere usoro a na-ekpo ọkụ, okpomoku ncha ahụ na-adị gburugburu 160 Celsius F.
Mmanụ ọ bụla dị mkpa dị iche ma nwee ike dịgasị iche iche
Ihe ozo bu ike nke mmanu di nkpa. Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa siri ezigbo ike, yabụ ịnwere ike itinye obere n’ime ha na Ntụziaka. Ọ bụrụ na i tinye mmanụ dị oke mkpa, ị ga-emefu ego, mana ncha gị nwere ike ibute akpukpo anụ ahụ na ọnụnọ ọhụụ.
Mmanụ nke dị oke elu nwere mmanụ siri ike nke ukwuu ma nwekwa ike ịmasị anyị. Scfọdụ isi dịka clove na cinnamon nwere ike ịkpasu iwe ma ọ bụrụ na a overụbiga ya ókè.
Usoro ntu oyi na nchacha na-aga na mgbanwe pH dị iche iche, na-ebute ọnọdụ ọjọọ maka mmanụ dị mkpa a kapịrị ọnụ. Ufodu mmanu mmanu di nkpa, dika oyibo na citrus (lemon, bergamot, nkpuru osisi grape, wdg), nwere ike iju ngwa ngwa. Mmanụ ndị a na-efe efe ngwa ngwa na ncha usoro ncha.
Maka njigide kachasị mma, jide n'aka na mmanụ dị mkpa ị na-eji sitere onye a tụkwasịrị obi ma akwadoro ka iji ya mee ncha. Gbaa mbọ hụ na mmanụ ndị ahụ dị mkpa na-eso usoro sisụcha a kapịrị ọnụ.
Gbanwee Onwe Gị Na-amasị Gị
Ihe ato gi choro ibu ihe nke ato. Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa dị ncha ma ọ bụ sie ike na ncha, yabụ ị nwere ike ịgbanwe ego ole nke ndị ahụ n'ịchọrọ gị. Dịka ọmụmaatụ, mmanụ Rose dị ike, yabụ ịkwesighi itinye ojiji nke rose dị ka mmanụ ndị ọzọ dị mkpa.
Mgbe ncha nke ncha gị bụ naanị maka otu onye, ​​ị nwere ike dozie ego ahụ dabere na mmasị gị na-esi ísì ụtọ. Rịba ama ego ole ejiri na nsonaazụ ya mgbe ejiri nhicha ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnọgide na-eme ka mkpụkọ isi gị na ọnụ ahịa ole a chọrọ. Ghagharịa oge ọ bụla na imi gị na ísì ụtọ gị.
N'ịbụ onye kwuchara nke a, agaghị m atụ aro iji ọtụtụ nutmeg, cinnamon, kloovu, wdg na ntinye nri.
Nrube isi na IFRA Standard (afọ ofufo)
Fratù Na-ahụ Maka ghapụ Mgbakọ Mba Nile guzobere ụkpụrụ ojiji na nchekwa dị mma maka ịgbakwunye mmanụ dị mkpa na ncha. Ndụmọdụ ndị a dabere na nyocha sayensị karịa ịkọbaghị akụkọ ma ọ bụ ịkọ nkọ. Agbanyeghị na ụkpụrụ IFRA dị na ndị ọrụ afọ ofufo, anyị na-akwado ịme ya. Anyị nwere ike were akwụkwọ ndị ahụ banye n'ime mgbe ị na-asa ncha, ọkachasị ihe ndị akpọrọ IFRA machibidoro.
Atọ ọkwa IFRA
Amachibidoro - Ọ pụtara na ịghara iji ihe eji eme ihe ma ọlị.
Amachibidoro - Ọ pụtara na ịnwere ike iji ihe ahụ mejupụtara; agbanyeghị, ekwesịrị iji ya n'okpuru otu ọkwa.
Nkọwapụta - Ọ pụtara na ị ga-enyocha ịdị ọcha nke ihe eji eme ihe.
ole mmanu kwesiri itinye mmanu
Ndị ọzọ ndụmọdụ maka ndị ncha
Iji mee ka njigide na-esi ísì ụtọ dị elu n'oge usoro ọgwụgwọ, chekwaa ncha gị n'ebe dị mma, kpọọ nkụ ma zere anwụ. Onwere ihe aghugho nke ime ka isi karia idi ogologo. Nwere ike idobe bọọlụ owu na mmanụ dị mkpa ejiri ncha mee ya mgbe ọ na-agwọ. Usoro a nwere ike inyere ncha ahụ “nu” ụfọdụ ísìsì n’usoro ịgwọ ọrịa. Zere itinye bọọlụ owu n’elu plastik ebe mmanụ dị mkpa nwere ike meghachi ya na plastik.
Ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ na-acha ọcha ka na-eme ncha mmanụ dị mkpa na kichin ha ma ọ bụ ụlọ nke ha. Ọ ga-adị mkpa ka ị kpachara anya iji chebe ndị ọzọ nwere ike ị nweta akụrụngwa gị. Chekwaa mmanu di nkpa n’ebe umu aka gi na umuaka gi di. Mkpọchi na igodo ga - enyere gị aka ịgọnahụ ohere ọ bụla a na - atụghị anya ya na nchịkọta mmanụ gị dị mkpa.